thinzar's blog: Once uponaSaturday (၁)
Labels: outdoor activities, personal
စနေနေ့တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေက paintball သွားကစားမယ်ဆိုပြီး အတင်းခေါ်တာနဲ့ လိုက်သွားဖြစ်တယ်။ အားလုံးက ကျောင်းပြီးကြပြီဆိုတော့ သူတို့နဲ့က ဒီတစ်ခါမှ မတွေ့ရင် နောက်ပြန်တွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးက သိပ်မရှိတော့ဘူး ဘာညာနဲ့ သုံးခွန်းလောက် ပြောလိုက်တော့လည်း သူတို့နောက် ပါသွားတာဘဲ။ Paintball ဆိုတာ ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ ကစားနည်း တစ်မျိုးပေါ့။ sports စာရင်းထဲတော့ သွင်းထားတယ်ဆိုဘဲ။ (extreme sports ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။) အရင် တုန်းက သူများတွေ ကစားနေတာတော့ သွားသွားကြည့်ဖူးတယ်။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ဝင်ကစားကြည့်ဖို့ကတော့ မျက်ခုံး ခပ်လှုပ်လှုပ်ဘဲ။ အသားနာမှာ ကြောက်လို့။ အခု သွားကစားတယ်ဆိုတော့ မယုံလည်း ပုံပြင်မှတ်ပေါ့နော်။
Paintball ဆိုတာ အမှန်တော့ စစ်တိုက်တမ်း ကစားနည်း တစ်မျိုးပေါ့။ လေသေနတ် အကြီးကြီးတွေထဲမှာ ကျည်ဆံထည့်ပြီး ပစ်ရတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကျည်ဆံတွေက အရှိန်နဲ့ ပစ်လိုက်လို့ ထိသွားရင် ပေါက်ထွက်သွားပြီး အထဲက အရောင်တွေ ထွက်လာတယ်။ လူကိုထိရင် နာလည်းနာတယ်။ အဝတ်အစားလည်း ပေသွားတယ်။
အဲဒီနေ့က Rimba Harmonis မှာ သွားကစားတာ။ Gombak နဲ့ သိပ်မဝေးဘူး။ KL မှာတော့ paintball field တွေ လေးငါးခု ရှိတယ်လို့တော့ ပြောတာဘဲ။ အရင်က မြေပြန့်ကွင်းပြင်ပေါ်မှာ ကစားကြတာဘဲ တွေ့ဖူးတာ။ အခု ဒီတစ်ခေါက် သူငယ်ချင်း မရွှေချောက ဘယ်ခေါ်သွားသလဲဆိုတော့ ပိုပြီး challenging ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး တောလိုမျိုးနေရာမှာ setting လုပ်ထားတဲ့ paintball field ထဲ ခေါ်သွားတယ်။ အောက်က ပုံကိုသာ ရှုပါလော့။ ကွင်းကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ပြန်ပြေးရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။
နောက်တော့လည်း ရောက်မှတော့ ကစားလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချပြီး ဝင်ပါဖြစ်သွားတာ။ သွားတာ အားလုံးပေါင်း ရှစ်ယောက်ဆိုတော့ လေးယောက်တစ်ဖွဲ့။ ပွဲမစခင် ကွင်းတာဝန်ခံက rules တွေကို ရှင်းပြတယ်။ သေနတ်ကို ဘယ်လို ကိုင်ရမယ်၊ မောင်းက ဘယ်လိုတင်တယ်၊ ဘာညာဘာညာပေါ့။ safety အတွက်ကတော့ face mask ကို မချွတ်နဲ့၊ တစ်ခြားနေရာထိရင် ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဦးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိတယ်.. ရန်သူက ကိုယ်နဲ့ တစ်မီတာဝန်းကျင်လောက်ဘဲ ကွာရင် မပစ်နဲ့.. surrender သာ လုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့၊ မဟုတ်ရင် အဲဒီလောက် အကွာအဝေးမှာ ပစ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ တော်တော် အီစလံ ဝေသွားမှာ သေချာတယ်။ လေသေနတ်အားကလည်း တော်တော် ပြင်းတာကိုး။ သူပြောတာတော့ CO2 gas ထည့်ထားတယ် ဆိုလား။ သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကို ထိရင် သေတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ် ပြိုင်ပွဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျည်ဆံထိသွားလို့ရှိရင် ထွက်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်သွားပြီး အသက်ကို ပြန်ပြီး recharge လုပ်လို့ရတယ်။ ပြီးရင် အရှေ့တက်ပြီး ဆက်ပစ်ပေါ့။ ရန်သူဘက်အခြမ်းကို ရောက်လို့ သူတို့ အလံကို ရပြီဆိုရင် နိုင်တာပေါ့။
package က ကျည်ဆံ ၁၀၀ဝ ပါတော့ နှစ်ပွဲကစားလိုက်ရတယ်။ ကွင်းက တောင်စောင်းကြီးလို ဖြစ်နေတာ။ ပထမ တစ်ပွဲမှာ အောက်ဘက်က အခြမ်းမှာ ကျတယ်။ အစက ကြောက်နေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထဲကနေ မထွက်ရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အခြားလူတွေတော့ တက်သွားကြပြီ။ သူများ ပစ်နေတာတွေကြည့်ရင်းနဲ့မှ နည်းနည်း feel ဝင်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီး ရှေ့တက်ပြီး ချတာဘဲ။ ကျည်ဆံတွေကို မနည်း ရှောင်ပြီး ရန်သူဘက်က တစ်ယောက်ကိုတော့ သတ်လိုက်နိုင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ပထမတစ်ပွဲမှာတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့က အလံရလိုက်ပြီး နိုင်သွားတယ်။ ကျည်ဆံ တစ်ချက်မှ မထိဘဲ ပြီးသွားတာပေါ့။ ဘယ်ထိမလဲ၊ နေရာကမှ မရွေ့တာ။ :-D ပထမ တစ်ပွဲပြီးမှဘဲ နည်းနည်း အရှိန်ရသွားတယ်။ ဒုတိယ တစ်ပွဲကြတော့ အပေါ်ဘက်ခြမ်းကျတယ်။ အောက်မှာနေတုန်းက သိပ်ကြောက်ဖို့ မကောင်းဘူး။ အပေါ်ရောက်တော့ တော်တော် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့မတက်ရဲဘူးလို့ (အမှန်က မဆင်းရဲတာလို့) ပြောတော့ သူတို့က ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ sniper လုပ်ဖို့ ခန့်အပ်လိုက်တယ်။ ကင်းစောင့်ပေါ့။ လွယ်မယ်လို့ ထင်ထားတာ ရောက်တာနဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲတာဘဲ။
ကင်းစောင့်ဆိုတော့ အားလုံးထက်နည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာကို ရောက်သွားတော့ အားလုံးမြင်ရတဲ့ နေရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အားလုံးက ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်းမြင်နေရတော့ မဲပြီး ပစ်ကြတာ။ ဒီနေရာမှာ မနေချင်ဘူးလို့လဲ ပြောလို့ မရတော့ဘူး။ အဖွဲ့ထဲကသူတွေက အားလုံး ရှေ့တက်သွားကြပြီ။ အစပိုင်းကတော့ ရှောင်နေပါသေးတယ်။ ရန်သူဘက်က လုံးဝ အရှေ့တက်လာမှဘဲ ပြန်ပစ်မယ်ပေါ့။ နောက်တော့ သူတို့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရမ်ဘိုများ မှတ်နေကြသလားမသိ။ မရပ်မနား တရစပ် ဒက်ဒက်ဒက်နဲ့ပစ်တော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ လူရိပ်မြင်ရင် အကုန်လိုက်ပစ် ပစ်လိုက်တယ်။ အေးရော.. လက်ဖြောင့်လား မဖြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ ပစ်ရတာတော့ ရေလည် အရသာ ရှိတယ်။ ကြားထဲမှာ ကျည်ဆံတစ်လုံးက ခေါင်းကို လာမှန်သေးတယ်။ မကွဲသွားတော့ နည်းနည်းလေး နာသွားတာပေါ့။ သံတုံးကြီးနဲ့ ပစ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျည်ဆံ ကွဲသွားရင်လဲ တစ်ခေါင်းလုံး ဝါထိန်သွားမှာ သေချာတယ်။
တစ်ယောက်ကို ကျည်ဆံ တစ်ရာကျော်ဆိုတော့ တော်တော်ကြာကြာ ကစားလိုက်ရတာပေါ့။ တစ်ခြားဘက်က လုံးဝ defensive ကစားနေတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့က အရင် ကျည်ဆံ ကုန်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပွဲပြီးခါနီးလောက်မှ ဘယ်ကမာ္ဘက ပျံလာတဲ့ကျည်ဆံ တစ်လုံးလဲ မသိ ဗိုက်နားတည့်တည့်ကို မှန်သွားတာ။ ဟူးဟူး… တကယ့်ကျည်ဆံဆိုရင်တော့ ပွဲချင်းပြီးဘဲ။ ဒီကျည်ဆံပျော့ပျော့နဲ့တောင် ဒီနေ့ထိ နာနေသေးတယ်။ ကိုယ်ကတောင် တော်သေးတယ် ပြောရမယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို လက်ကို ထိသွားတာ။ အပြန် ကားတောင် မမောင်းနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ကိုယ့်အသားကိုယ် နာအောင် သွားလုပ်သလို ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံး ပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ထပ် ကစားချင်သေးလားလို့ မေးရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေနဲ့တော့ သိပ် ကီးကိုက်တဲ့ ကစားနည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပစ်ရတာကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျည်ဆံမှန်ရင်က နန်းမတော် မယ်နုတွေဆိုတော့ နည်းနည်းပိုနာတာပေါ့။ ဗိုက်ကို တစ်ချက်ထိထားတာ အခုထိ နာနေတုန်း။ ကိုယ်တောချောတွေကတော့ တကယ် စစ်တိုက်ရနေသလို ကွင်းထဲမှာ လေးငါးပြန်လောက် ဂျွမ်းပစ်ပြီး ကစားရတော့ ကြိုက်တော့မပေါ့။
Once uponaSaturday ပထမပို်င်း ဤတွင် ပြီးဧ။်။ နောက်နေ့မှ ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်တော့မယ်။
That was really funny the way you explain in myanmar maybe i hadn't read long time ago. I feel Regret but choose priority(exam paper). Love you all
8/4/08 2:08 PM
ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်ပါ ဝင်ကစားချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်.. ကွင်းကတော့ ရှယ်ပဲ..လုံးဝစစ်မြေပြင် အတိုင်းပဲ. :D
ဒုတိယပိုင်း စောင့်နေမယ်ဗျာ. :)
8/4/08 2:58 PM
ti>> i hope u can join us next time.. i can understand that u hv to give priority to exam :)
yeah.. since my English writing style is quite boring, i would rather blog in burmese, which i know well enough so that I can play with words. stay tuned!!
by the way, why u give your name to be "ti"???
mbl0gger>> ဒါတောင် ပုံတွေ မရသေးလို့ တစ်ပုံဘဲ တင်ရသေးတာ။ ကြုံရင် သွားကစား ကြည့်ပါလား။ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ အရမ်းကို ကြိုက်ကြတယ်။ ကစားတာက ပထမပိုင်းမှာ ပြီးသွားပြီ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ စားတာနဲ့ သောက်တာဘဲ လာလိမ့်မယ်။ =D
8/4/08 5:56 PM
ပျော်စရာကြီးပဲ အမ ဗီဒီယိုတွေထဲပဲတွေ့ဘူးတယ် အပြင်မှာ ဆော့ကြည့်ချင်တယ်။ =)
8/4/08 6:30 PM
အစ်မရေးထားတာ ဖတ်ရတာ ကိုယ်တောင်ဆော့ချင်လာပြီ။ ထိလို့နာသွားရင်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲမပြောတတ်ဘူး။ ဆော့ရတာတော်တော်ပျော်ခဲ့လား။ :D
9/4/08 1:40 AM
tayzar>> ကိုယ့်ကို ကျည်ဆံ မမှန်ရင်တော့ အတော် ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ ကစားနည်းဘဲ။ ကြုံရင် ကစားကြည့်လိုက်.. no regrets!
အန်တီညီမလေး ဝင်္ကပါ>> လာခဲ့လေ။ ခေါ်သွားဆော့မယ် =)
10/4/08 3:25 PM
Hello ma thinzar......
Thank U so Much For You Post.
Me also one of the myanmar worker who work in malaysia.i very intresting doing blog.but still teaching computer language but still fooling.But today i find that blog....she can helpalot of knowledges.Really really Thank You So Much.(may i know why can't open some doc-form can't open star writer?Why some files can't delete from USB drive?) 99htetlin@gmail.com
29/4/08 1:47 AM
Where the place & How to apply entry that game field?
29/4/08 1:49 AM
lin lin >> Thanks for visiting my blog too :-)
The paintball place is in Gombak (somewhere not very far from Terminal Putra Station [LRT]). you can get the details from Rimba Harmonis web site. It is RM 480 fora1000 bullet package (max 10 persons can play).
may i know why can't open some doc-form can't open star writer?
I am not so sure about what isastar writer.
Why some files can't delete from USB drive? Files can't be deleted from USB either because that file is being opened or it is accessed by some application. you can try an application called "Unlocker". I've write about it in this post. Try to unlock the file/folder first then delete it.
29/4/08 10:16 AM
now adays people having problems with can not delete or can not modify the files, after introducing to the Windows Vista. Windows Vista have higher security settings, which sometimes fools the novices. such as the folder permission has accidentally or for some reason do not gave as everyone, then those kind of files or folder can not be deleted even if you move to another pc. if that problem is in the PenDrive you will haveahead-ache why cant you delete this file. Easy. just right click, go to Security permission tab, and add Everyone user account.
Vista is good at some point and bad at some points too....
29/4/08 8:32 PM
for Star Writer, i think he/she is talking about StarOffice-Writer, it's same as OpenOffice-Writer. yes, you can not open with older version of staroffice writer or OppenOffice. Latest Version of OpenOffice and StarOffice can open Word2007 files now. try to update or down latest version from Sun.com website.
29/4/08 8:37 PM
Thank u mmgamedev.
30/4/08 10:42 AM
ကိုယ်ပိုင် search engine တစ်ခုရချင်ရင်